Ithini inombolo yami yokuphepha komphakathi? | Ezezimali Zomnotho
Ithini inombolo yami yokuphepha komphakathi?
UJose recio | | Ikhaya
Kungenzeka ukuthi uzibuze umbuzo lo mbuzo omayelana nawo ngesikhathi esithile empilweni yakho. Ithini inombolo yami yokuphepha komphakathi? Kubukeka sengathi kuyinto engenacala, kepha iqiniso ukuthi kusenenani elifanele lezakhamizi ezingazazi lezi zinombolo noma ukuthi yini embi lapho zingalanda khona lolu lwazi olubalulekile yenza izinqubo eziningi zokuphatha. Ngoba ngomzuzu oqondile othola ngayo le datha, ngeke uphinde ube nenkinga encane ngokwamukelwa kwayo lapho kufunwa lolu lwazi oluyisisekelo.
Yebo, ngaphezu kwakho konke, inombolo yokuhlanganiswa kwezokuphepha komphakathi ingenye yemibhalo eceliwe kakhulu lapho wenza noma yiluphi uhlobo lwenqubo. Hhayi ukuphatha ukuphatha ukuqokwa kwezokwelapha kuphela, kepha nokwenza ngokusemthethweni inkontileka yokuqashwa noma okunye okusemthethweni nabaphathi bakahulumeni. Uma kwenzeka ungazi ukuthi iyini inombolo yakho yokuphepha komphakathi, sizokunikeza uchungechunge lwamathiphu amancane ukuze ukwazi thola ngokushesha futhi kalula. Ukuze kuthi kusukela manje lo mbuzo ungabe usabonisa inkinga njengoba kungenzeka kuwe manje.
Kulesi simo esivamile, kufanele ukhumbule ukuthi le nombolo akuyona idatha encane. Hhayi kancane ngoba kukusiza ukuthi ukhonjwe ku- ubudlelwano bakho ne-Social Security. Yize le nombolo ingaziwa kwabaningi, iqiniso ukuthi inokubaluleka kwayo. Ungamangalelwa ukuthi uhlolwe igazi, ungene esibhedlela noma uthole umuthi wokugoma. Izicelo zayo azipheli njengoba ubona kusengaphambili ekwakhiweni kwalesi sihloko.
1 Iphi le nombolo?
2 Ukuhlanganiswa Nokuvikeleka Komphakathi
3 Thola inombolo yobulungu
4 Itholakala kuphi le datha?
5 Ezinye izindlela zokuyikhomba
6 Ezinye izici okufanele zicatshangelwe
Iphi le nombolo?
Umzuzu obaluleke kakhulu ufikile, owokwazi ukuthi ungalutholaphi lolu lwazi olubalulekile. Yebo, phambi kwabo kufanele wazi ukuthi inombolo yokuxhumana yeSocial Security noma, ebizwa nangokuthi Inombolo Yezokuphepha Komphakathi ukuze yome, inombolo eyingqayizivele enamadijithi ayi-9 nokuthi kuphoqelekile kunoma yisiphi isakhamuzi esifuna ukuqala umsebenzi. Yize izophinda ibe nezinye izinhlelo zokusebenza ezifanele kakhulu, njengoba uzobona ngezansi. Ngakho-ke, kuzoba ngokuphelele ukufuna noma ukuthola le nombolo esikhuluma ngayo njengamanje.
Ngakolunye uhlangothi, kubaluleke kakhulu futhi ukuthi wazi ukuthi uma ungumzuzi wanoma yiluphi uhlobo lwempesheni noma olunye usizo, kuphoqelekile ukuthi ube nalokhu inombolo yokuhambisana. Kuze kube seqophelweni lokuthi ukungazi kwabo kungakudalela inkinga engaphezu kweyodwa kusukela manje. Futhi esimweni lapho ungalindelanga khona. Ungakhohlwa uma ufuna ukuba nezimo ngaphansi kolawulo oluqinile. Njengakwelinye icala kwenzeka kubasebenzisi abanganaki kakhulu futhi siyethemba ukuthi awuyena wabo.
Ukuhlanganiswa Nokuvikeleka Komphakathi
Incazelo yalo yangempela ukuthi izonikeza konke okusemthethweni kuzo zonke izinhlobo zabasebenzi, ezokwelapha kanye nezenzo zokuphatha. Ngalesi sizatho esijwayelekile, ungakhohlwa ukuthi ngaphandle kwale nombolo ngokuqinisekile ngeke uvele njengelungu lohlelo lwe-Social Security. Lo ngumphumela wokuqala walokhu kukhohlwa futhi phakathi kwezinye izinto, ngeke ukwazi ukuqala ukusebenza. Noma okungenani hhayi ngendlela yokulawula edingekayo yimithethonqubo yamanje yabasebenzi eSpain nase-European Union.
Kunoma ikuphi, kungumbhalo lapho zonke izakhamizi zaseSpain zinelungelo. Inqobo nje uma uchungechunge lwezidingo luhlangatshezwa. Esinye isici okufanele sihlolwe ukuthi le nombolo yokukhomba kuyohlale kufana. Ngaphandle kwezigaba zenqubo ezingaphuhliswa ngabanikazi bayo. Vele, ngeke zibe khona izinguquko, yize izinguquko ezisematheni zenzeke ngokuqhubekayo. Ngalo mqondo, kuyikhodi abayabele unomphela futhi lapho bangafeza khona izinqubo zabo kuzo zonke izinhlobo zemisebenzi ekuphathweni komphakathi.
Thola inombolo yobulungu
Kubalulekile futhi ukuthi wazi ukuthi ungayithola kanjani inombolo yokuxhumana yeSocial Security. Ngalo mqondo, kuzokwenzeka kulezi zimo ezilandelayo lapho sizokuveza khona ngezansi.
Ekuqaleni, sonke isakhamuzi siyoba nelungelo lokuthola lo mbhalo osemthethweni.
I-Los osomabhizinisi, ukuze abasebenzi abangena ensizakalweni yakho futhi abangenayo inombolo yokuphepha komphakathi bakwazi ukuyithola njengoba kudingeka.
Futhi i Abaqondisi BesiFundazwe boMgcinimafa Jikelele Ukuphepha Komphakathi noma Ukuphatha kuzoyabela lapho abasebenzi noma abaqashi behluleka ukuhambisana nesibopho sabo.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele futhi kwaziswe ukuthi le nombolo ayitholakali lapho usebenza kuphela kodwa nokuthi yizingane ezincane noma abantu abamile Bangaba nazo ukuze bakwazi ukujabulela izinsizakalo noma izinzuzo ezinikezwe inombolo yokuxhumana exhumanisa abanikazi ne-Social Security.
Itholakala kuphi le datha?
Ukuze ukwazi ukubona le khodi, okumele ukwenze nje ukuya ekhadini lakho le-Social Security. Izovezwa engxenyeni esemqoka yayo nangokucacile nangokucacile. Izoboniswa njenge-CIP eyi- ikhodi yokuhlonza yomuntu siqu futhi lokho kuzovezwa engxenyeni emaphakathi yale plastiki. Ngakolunye uhlangothi, ngeke kukubize ukukuthola ngoba kubonakala ngoba kuyinombolo eyingqayizivele enamadijithi ayi-9. Lapho izokudonsa khona ngoba ihluke kakhulu egameni nesibongo sabaphathi. Ngeke kube khona uhlobo lokungabaza ukuthi ngeke ube nankinga ukufika kule datha edingekayo empilweni yakho yansuku zonke.
Ungayifeza le nqubo ngekhadi lakho lezempilo. Okusho ukuthi, kufanele uye kufayela le- ngemuva ukuze ngikwazi ukuyibona. Lapho izinombolo zingahluka khona kepha kukusiza ukuthi ubone ukuthi izinombolo ezisithandayo ziphi. Uchungechunge lwezinombolo ozibona kumalukeke inombolo ye-Social Security. Lapho izinombolo ezimbili zokuqala yilezo ezichaza ikhodi yesifundazwe, izinombolo ezibhalwe ngomalukeke ze-SS nezinombolo zokugcina ezokulawula. Ngale ndlela, ngeke kube nankinga ukuze nganoma yisiphi isikhathi ukwazi ukuqondiswa kulolu lwazi lwekhadi.
Ezinye izindlela zokuyikhomba
Noma kunjalo, unamanye amasistimu alula ngokulingana ukufinyelela kulezi zinombolo. Enye yazo ivela kokwayo zokupheka ezokwelapha ozoba nayo ngokuqinisekile ekhaya lakho. Lapho kuchazwa khona ngokucacile inombolo Yezokuphepha Komphakathi. Kuyisu elingasoze lehluleka futhi lingenye yezinsiza onazo njengethuba lakho lokugcina lokufinyelela kulesi sigaba senqubo. Ngakolunye uhlangothi, ungabiza nokuPhepha Komphakathi ngqo ukuthola le khodi. Kuyinto elula njengokushayela ku-901502050 XNUMX XNUMX, ukuze bazokubuza igama lakho, isibongo kanye nomazisi wakho futhi bazokwazisa ukuthi ungayithola kanjani le nombolo kamazisi.
Isikhungo sezempilo ngomunye umthombo wolwazi ongaphendukela kuwo yi- umtholampilo esiseduzane nekhaya lakho neNcwadi Yomazisi Kazwelonke lapho ungacela khona noma yiluphi uhlobo lolwazi mayelana nokuzibandakanya kwakho kwezeNhlalakahle. Njengasehhovisi le-elekthronikhi ngokusebenzisa i-Affiliate Service. Ngaphezu kwalokho, ungaba nalolu lwazi olubalulekile ngeselula oyixhumanise ne-akhawunti nangomyalezo okwifomethi ye-SMS.
Ezinye izici okufanele zicatshangelwe
Vele, kubaluleke kakhulu ukuthi uhlale ukhumbula ukuthi kunezixazululo ezihlekisayo okufanele uzihlole kusuka manje. Isibonelo, iqiniso lokuthi kungahle kube nabantu abaningi noma abasebenzisi abangaba nenombolo Yezokuphepha Komphakathi, noma kunjalo abanayo inombolo yokuhlangana ngoba nje bengasebenzi noma bengasebenzi ngaleso sikhathi. Ngaphandle kolunye uchungechunge lokucatshangelwa okungathinta lokhu inqubo yokuphatha lokho kukuthinta ngendlela eqonde ngqo noma engaphansi.
Ngakolunye uhlangothi, le nombolo Yezokuphepha Komphakathi izoba yiNombolo Yokuxhumana lapho umuntu qala umsebenzi womsebenzi, asayine inkontileka futhi ibhaliswe kuhlelo olujwayelekile lokuPhepha Komphakathi. Ungahle ungalazi, kepha nezinsana uqobo zinamakhadi abo ezempilo nezinombolo zabo ze-SS. Kuyinto ongayihlola ukuthi ukulesi simo somndeni.
Ukuze ufeze ngempumelelo lesi simo esikuphakamisa sona, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi abazali kufanele baye I-Social Security Information and Attention Centre ukubhalisa ingane yakho njengendlalifa yekhadi eligcinwe obaba noma omama. Ekugcineni, lena inkinga encane, kepha ethola ukuhlobana okukhethekile ngenxa yokubaluleka kwezenzo ongazenza ngale khodi yokuhlonza. Ngoba kubaluleke kakhulu kunendlela ongacabanga ngayo kwasekuqaleni. Kuzo zonke izinhlobo zezinyathelo ongazingenisa empilweni yakho yansuku zonke, noma emndenini wakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ikhaya » Ithini inombolo yami yokuphepha komphakathi?
Ukudluliselwa kuthatha isikhathi esingakanani?